Fitaovana fitsaboana nify, lafaoro seramika, nify sandoka nify - Zetin
Zirconia Sintering Lafaoro
Chairside Sintering Lafaoro
FURNACE SINTERING MINI
Bakoly Lafaoro Video
Sintering Lafaoro Video
FIARAHAN-DALANA / FANDRESANA MAFY
FANDAHARANA SILICONIT SINTERING
Zhengzhou Zetin Elektromekanika Fitaovana Co., Ltd.
Miaraka amin'ny fampivoarana ny siansa sy ny teknolojia, ny fomba fitaterana dia nihatsara be. Afaka misafidy ny fomba fitaterana arakaraka ny fandefasana azy isika. Na izany aza, voataonan'ilay tantara an-tsary Coronavirus, fomba fitaterana maro no voarara. Miaraka amin'ny fanidiana ny recen ...
Manohitra ny virus corona, miaraka!
Araka ny fantatsika rehetra, ny olona dia iharan'ny koma virus corona tato anatin'ny volana vitsivitsy. Noho ny viriosy dia azo ampitaina tokoa, firenena maro no mihidy. Na eo aza ny toe-draharaha iraisam-pirenena henjana dia mbola manizingizina ihany izahay ny hanome milina maika an'ireo mpanjifa sahirana. Amin'izao fotoana izao, manana ...
1. Ampiasao ny mihidy memy. 2. Ataovy ny fandaharana asa mandeha ho azy tanteraka, izay tsy mety amim-pahombiazana ny loto sehatra tsy misy olona an-tsehatra. 3. Ataovy miavaka sy manatsara ny fanafanana singa ka dia ny fanafanana singa Tsy mora ny Peel eny sy amin'ny fomba mahomby kokoa miaro ny zirconia. 4. Ampiasao ...